Waa maxay sababta hirarka kuleylku u dhacaan | Saadaasha Shabakadda
Waa maxay sababta hirarka kuleylku u dhacaan?
Sergio Gallego | | Mawjadaha kuleylka
Mawjadaha kuleylka laga cabsado waa dhacdo caadi ah oo sii kordheysa inta lagu jiro bilaha xagaaga. Sanadihii la soo dhaafay, Isbaanishka waxaa la soo darsay dhacdooyin aad u daran oo leh heerkul si fudud uga gudbaya xannibista xiiqda ee 40 darajo ayagoo maalmaha ka dhigaya kuwo aan loo dulqaadan karin oo aan dhammaanayn. Laakiin waligaa ma is weydiisay sababta ay mowjadaha kuleylka noocan ahi u dhacaan?
Dhowr maalmood, Isbaanishku wuxuu la dhibtooday waxa loogu yeero kuleylka. Heerkulku si sahal ah ayuu uga badnaan karaa 40 darajo 3 ama maalmo ka badan taas oo ka dhigaysa deegaanka ficil ahaan in aan la neefsan karin oo kama bixi kartid wadada ilaa mugdi. Inta badan khubarada saadaasha hawada ayaa sheegaya in tani ay sabab u tahay dabeylaha diirran ee ka socda Afrika ee ku wajahan jasiiradda.
Khubaradan ayaa u maleynaya in hirarka kuleylka ay marba marka ka dambeysa sii kordhayaan oo ay heer kulka aad uga sarreeyaan ay yihiin dhowr sano ka hor. Xaqiiqadani waxay ugu wacan tahay saameynta halista ah ee isbeddelka cimilada uu ku yeesho meeraha oo dhan maalinba maalinta ka dambeysa. Waqtigaan la joogo iyo sida ku cad xogta la isku halleyn karo, Isbaanishka waxaa ka jira mowjado kuleyl ah 5tii sano mar, halka nus qarni ka hor ay ahayd wax aan caadi ahayn oo dhaca 20kii sanaba mar.
Kordhinta halista ah ee heer kulka, dhalaalida in dhammaan aagga Arctic ay dhibaataysan yihiin iyo horumarka isbeddelka cimilada Kuwani waa arrimaha halista ah ee keenaya in hirarka kuleylku ay noqdaan kuwo ku soo kordha oo ku sii dheeraada aagagga meeraha sida Spain. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay inay dadku aad iyo aad ugu sii feejignaadaan si ay u ogaadaan in isbeddelka cimilada ay tahay wax runti aad u daran oo ay ku sababi karto dhibaato baaxad leh meeraha, sida cabbirka hirarka kuleylka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Mawjadaha kuleylka » Waa maxay sababta hirarka kuleylku u dhacaan?
Sawir duufaan cajiib ah oo laga qaaday diyaarad
Dooxada Gacanka ayaa yareyn doonta kuleylka adduunka ee Yurub